अस्पताल खर्च ६ लाख, औषधी खर्च ७ लाख – Janacharcha.com
» स्वास्थ्य अंक: 642
अस्पताल खर्च ६ लाख, औषधी खर्च ७ लाख
उपोभोक्ता ठगीरहदा राज्य बेखबर
Janacharcha.com बिहिबार, भाद्र ०५, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, भाद्र ५
विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार भएका एक विरामीको औषधी खर्च ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उत्ता अस्पताल खर्च भने ६ लाख रुपैयाँ मात्र भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । यसरी अस्पताल भन्दा औषधी खर्च बढी आएपछि विमारीको आफन्तजन चकित परेका छन् ।
विरामी भारतको अररिया जिल्लाका बथनाहा निवासी मो. सिराज अंसारीको हुन् । सवारी दुर्घटनामा परी सख्त घाईते भएको अंसारीलाई दुई महिना अघि उपचारका लागी न्यूरो अस्पताल ल्याईएको थियो । सबै उपचार सकिएपछि अस्पताले अंसारीलाई भदौ २ गते डिस्चार्च गरी घर लैजान भनेको थियो ।
अस्पतालको निर्देशन अनुसार विमारीका आफन्तजनले अंसारीलाई डिस्र्जाच गरी घर फर्काउने क्रममा औषधिको पैशा तिर्नु बाँकी छ भन्दै सत्यम नेपाली नाम गरेका एक व्यक्तिले बिचबाटो बाटै बिरामी बोकी घर जादै गरेको एम्बुलेन्स पुनः अस्पताल फर्काउन लगाए । सत्यम नेपाली न्यूरो अस्पतालको परिसरमा रहेको निलगौरी औषधि पसलको संचालक हुन् ।
बिमारीका पिता मो.सदिक अंसारीका अनुसार फार्मेसीको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेपनि फजुलका रकम जोडी थप पैशा तिर्न सत्यम नेपालीले दवाब दिएको बताए । उनले भने “हामीले करिब चार लाखभन्दा बढी पैशा फर्मेसीलाइ तिरिसकेका छौं, हामीले के को चार लाख भयो भनेर एउटा पर्ची पनि मागेनौं अन्त्यमा आएर सत्यम नेपालीले बिल ७ लाख पुगेको छ थप ३ लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्दै बिचबाटो बाटै हामीलाई फर्कायो ”
बिचबाटोबाट अपमानित हुदै अस्पताल फर्किनु परेपछि विरामीका आफन्तजनले अस्पताल परिसरमा केही बेर हंगामै मच्याए । आफु ठगीमा परेको भन्दै विरामीका आफन्तजनले प्रहरी, पत्रकार, नागरिक समाज एवं अस्पतालको प्रशासनलाई तत्काल गुहार मागे ।
गुहारवाट जम्मा भएको जमातलाई फर्मेसीको कुरामा विश्वास नलागेपछि के के सामान खरिद भएको हो भनी ७ लाखको बिल तत्काल पेश गर्न निलगिरि फर्मेसीलाई दावाब दियो । बिल कुराआएपछि फामेर्सीका संचालक सत्यमले बिल पनि नदिने र विरामीसँग थप ३ लाख पनि नलिने आपसी सहमती गर्दै केस त्यही डिसमिस गरिदिए । सात लाखको बिल दिन नसकेपछि नगरिक समाजले फामेर्सीले ठगी गरेको हुनुपर्ने अड्कल काटेपनि, फामेर्सी र विरामी पक्षविच भएको सहमतिको कारण कसैले केहि बोल्न सकेनन् ।
अर्कोतर्फ निलगरि संचालक सत्यम नेपालीले अस्पताल र नागरिक समाजको दावाबमा आफुले घाटा वेहोर्रनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिल चानचुन ७ लाखकै भएपनि दावाब खेप्न नसकेपछि आफुले घाटा खाएर विमारीलाई जान दिएको सत्यम बताउछन् ।
यी सबै घटना न्यूरो अस्पतालकै डिजाईनमा भएको समेत सत्यमले आरोप लगाएका छन् । बाहिरको फामेर्सीले गरि खाएको देख्न नसक्ने प्रवृति अस्पताल संचालनहरुको रहेको र बारम्बार अस्तालले विरामीलाई औषधीको पैशा नतिरिकनै फारर हुन सहयोग पुर्याईरहेको सत्यमको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय विराटनगरमा ठुला अस्पताल आसपास संचालित फार्मेसीहरुले आनाहक बिल बनाएर बिरामीहरुसँग बढीभन्दा बढी पैशा लिई ठगी गर्ने गरेका छन् ।
अस्पतालको भन्दा औषधीको बिल बढी आएपछि, ठगी गर्ने फार्मेर्सीको लिष्टमा अब निलगिरि फार्मेसीको नाम समेत थपिने हो की ? वा संचालक वास्तवमै अन्यायमा परेका हुन् यो कुरा बाहिर आउने जरुरी छ । यस विषयको तथ्यसत्य राज्यको संबन्धित निकायहरुले छानबिन गरेपछि मात्र बाहिर आउने छ ।
तर उक्त घटनामा राज्यका नियामक निकायहरुले खासै चासो दिएजस्तो देखिदैन । विराटनगरमा औषधीको विषयमा छानविन, खोजीनीति तथा कारीवाही गर्न सक्ने अख्तियार प्राप्त औषीधी व्यवस्था विभागको क्षेत्रीय कार्यलयले नै छ । तर पनि घटना भएको तिन दिन बितिसक्दा पनि उक्त कार्यलय बेखबर छ वा बुझ पचाएर बसेको छ , खै के हो थाह छैन् ।
तस्तै, लेनदेन र बिलबिजकको विषयमा छानविन गर्न सक्ने अख्तियार प्राप्त आन्तिरिक राजस्व कार्यलय विराटनगरले पनि हालसम्म सात लाखको बिलको बारेमा खोजी निति शुरु गरेको छैन् ।